Inona ny MIPS Tech? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Teknolojia mips - ny fomba fanamboarana
Teknolojia mips - ny fomba fanamboarana
Inona ny MIPS Tech?
Inona nyTeknolojia MIPS?MIPSmidika hoe Multi-directional Impact Protection System, izay lozam-piaramanidina mitarikaTECHNOLOGYao anaty fiarovan-doha natao mba hampihenana ny hery mihodina izay mety ho vokatry ny fiatraikany sasany.
(mozika mahery) - Ny fikorontanan'ny vatan'ny ati-doha dia taolana foana. Saingy amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy milaza aminao hoe taiza ianao no naratra - Raha nividy na nihevitra fiarovan-doha vaovao ianao tato anatin'ny taona vitsivitsy dia inoana fa nahita zavatra antsoina hoe MIPS ianao. MIMPS dia vokatra iray izay natomboka tamin'ny 2007.
Ary nanomboka tamin'izay dia namidiny mihoatra ny sivy tapitrisa ny fitaovan'izy ireo. Fa inona ny MIPS? Natao inona izy io? Ahoana no nampivelarana azy? Nasaina ho aty Suède aho, mba hahalala izany. (mozika elektronika malefaka) Amin'ny maha bisikileta anao, ny ankamaroantsika dia tratry ny lozam-pifamoivoizana na mety hitranga amin'ny ho avy, ary ao anatin'izany aho.
Afaka miaina zavatra antsoina hoe concussion isika. Hita ny soritr'aretin'ny moka. Fa inona no tena dikan'ny fikorontanana? Inona no tena endrik'izany ao amin'ny ati-doha? Hahafantatra izany dia niresaka tamin'i Hans izahay.
Neurosurgeon ary mpiara-manorina ny MIPS.- Ny fikorontanana, izay teny enti-milaza ny fikorontanan'ny vatan'ny ati-doha ao amin'ny karan-doha, Co concussion dia midika be dia be. Saingy tokony ho fantatrao fa ny 80 isan-jaton'ny fikorontanana dia malemy fanahy.
Raha 10 isan-jato no antonony ary ny ambiny kosa dia naratra mafy teo amin'ny lohany. Ireo sokajy rehetra ireo dia tafiditra ao anatin'ilay fikorontanana mahazo valiny avy amin'ireo mitovy taona aminao, na izay rehetra nahazoanao fikorontanana, tsy dia milaza izany firy. Ny vongan-tsofoka dia fampangovitana ny hozatry ny ati-dohanao ao amin'ny taolana karan-doha.
Saingy tsy voalaza ao hoe taiza ianao no nandratra tena matetika. Ankehitriny, raha maratra kely amin'ny lohanao ianao amin'ny maratra ary manao scan CT na MRI dia mety tsy hahita na inona na inona ianao. Na izany aza, raha manana ratra an-doha antonony ka mafy ianao, izay kambana koa, dia hahita zavatra betsaka ianao.
Saingy ny ankamaroan'ny fikorontanana dia vokatry ny ratra kely amin'ny lohanao izay tsy azonao faritana. Izay no fahitako azy. (mozika upbeat) - Nanatevin-daharana ahy izao i Peter Halldin, mpiara-manorina ny MIPS.
Iza no antenaiko hametraka fanontaniana sarotra vitsivitsy anio, manantena y. Ary mitadiava valiny vitsivitsy izay mbola tsy haiko. Ka Peter, miresaka amiko momba ny fiandohan'ny MIPS? Nanao ahoana ny andro voalohany? - Eny, nanomboka daholo izany tamin'ny fotoana nihaonako voalohany tamin'i Hans Van Holst, mpandidy ati-doha, ary nanontany ahy izy raha te hanao PhD, ary tsy azoko antoka fa te hanao an'izany aho, saingy hoy aho tamin'i Hans. Hiezaka aho.
Ary nanomboka namaky momba ny anatomie sy ny lohan'olombelona ary ny ati-doha izahay. Te hahafantatra momba izany i Hans, fa tsy fantatro. Ka hoy aho tamin'i Hans, 'Ka angamba azontsika atao ny mampiasa ny rafitra fiarovana' izay ananantsika ao amin'ny lohantsika ao amin'ny atidoha. 'Aiza ny ati-doha? afaka misosa mankamin'ny karan-doha. 'Ao amin'ny tsiranoka cerebrospinal.' Ka hoy i Hans, 'Heveriko fa hevitra tsara izany.' Noho izany dia nanomboka niasa manodidina an'io hevitra io izahay ary namantatra raha azo atao ny mametraka azy ao anaty fiarovan-doha, ary tamin'izany fotoana izany dia tsy dia nahalala firy momba ny fiarovan-doha izahay.
Ny fomba fitsapana ny fiarovan-doha, na ny fomba fianjerantsika bisikileta na môtô ay, ny fiarovan-doha ihany no fitsapana ho an'ny fianjerana madio miorina, mandrefy ny hafainganam-pandeha fotsiny, ary azontsika avy hatrany, tsara, nanana zavatra tsara momba an'io hevitra io izahay afaka mampihena hery mihodina izay ampitaina amin'ny atidohanao. Satria ny ati-dohanao dia mora tohina kokoa amin'ny fihodinana. Ary azonao io fihodinana io rehefa mianjera amin'ny tany amin'ny zoro ianao.
Ka io dia fomba fampifanarahana singa ao anaty piozila. Miaraka amin'ny fampahalalana voalaza momba izany. Ary tamin'izay dia takatray fa hevitra lehibe sy lehibe izy io ary mety afaka manova lehibe isika.
Ary mampihena ny isan'ireo naratra. Nanonona zavatra antsoina hoe fihodinana fihodinana ianao androany. Tsy mbola henoko io fehezanteny io.
Inona marina no atao hoe fihodinana? Ary inona ilay fitaovana toy izany noforoninao sy noforoninao mba hampihena ny ratra aterak'izany? - Heveriko fa hahatakatra ny fihodinana azonao raisina ny boxer, ohatra. Azonao atao ny mijanona mikapoka ny tenanao amin'ny kapoka mahitsy manodidina aorian'ny fihodinana. Ary avy eo tampoka teo dia hahazo tombony ambony izy ireo, azony ny fihodinana.
vidin'ny fanamboarana bisikileta
Ary avy eo dia roahina izy ireo. Ka ny lohan'olombelona sy ny ati-doha dia mailo kokoa amin'ity fihodinana ity noho ny fihetsehana tsipika iray, mihodina amin'ny zoro, raha ny tokony ho izy dia mihady amin'ny tany ny satroka ary azonao io fihodinan'ny fiarovan-doha io. Ary satria avo dia avo ny hery dia ampitain'ny fiarovan-doha amin'ny lohany io fihodinana io.
Ny zavatra ataontsika amin'ny fiarovan-doha MIPS dia manana sosona mihetsiketsika isika izay afaka mihetsika amin'ny lafiny rehetra, 10 ka hatramin'ny 15 milimetatra. Ka tena maka tahaka izahay fa milatsaka amin'ny ranomandry ianao. Ka raha mianjera amin'ny ranomandry ianao ny lohanao dia handeha foana amin'ny lalana tokony halehany ary mihodina.
Manana an'io isika ao amin'ity sosona misosa ity. Noho izany dia manana coefficient ambany amin'ny friction isika eo anelanelan'ny sosona sy ny fiarovan-doha. Ary avy eo dia alaintsika avy amin'ny fihodinana mankany amin'ny fandikana ny angovo.
Ary noho izany dia ahenantsika ny fihodinana fihodinana eo amin'ny loha sy ny ati-doha. (mozika elektronika malefaka) - Naharitra hafiriana vao nahazo ilay endrika ampiasainao amin'izao fotoana izao? Ary mivoatra tsy tapaka ve ianao amin'ny famolavolana vaovao amin'ny ho avy? Sa izao no volavola izay hiasa mandrakizay? - Manangana rafitra vaovao hatrany izahay. Mbola mianatra momba ny ratra amin'ny lohany isika.
Ny fivadihana, ohatra, dia ratra izay anarana iray fotsiny amin'ny famantarana iray. Na eo aza izany dia mbola betsaka ny fikarohana tokony hatao mba hahafantarana tsara izay simba ao amin'ny ati-doha. Fa ny hany zavatra fantatsika anio dia ity fikorontanana ity sy ratra mafy amin'ny ati-doha hafa dia vokatry io fihodinan'ny loha io.
Ary ny tena ataontsika, ny zavatra tokana ataontsika amin'ny fiarovan-doha MIPS sy ireo vokatra MIPS isan-karazany, dia ny fampihenantsika ny angovo mihodina izay nafindra tao amin'ny ati-doha rehefa tsy fantatsika mazava hoe inona ny hery hamelezako anao tsy maintsy atao ho anao hahazo korontana. Fantatray fa ny fiatraikany kely kokoa dia tsara kokoa ho an'ny lohanao sy ny atidohanao. Ary izany no ataontsika amin'ny fiarovan-doha MIPS (mozika elektronika) - Tsy azoko antoka tanteraka na tokony hiantsoako ity efitrano ity ho laboratoara fanadinana, efitrano misy birao na efitrano fanaovana spaoro multifunctional.
Satria jereo ity, manana ny zavatra rehetra ilainao hampiofanana amin'ny MIPS izy ireo. fiatoana atoandro indray. Misy ny dabilio mavesatra.
Manana karazana stepper ianao, milina fivoizana. Ary avy eo dia misy tabilao mifandanja sy baolina fanatanjahan-tena. Tady be dia be.
Ary avy eo ny zava-dehibe indrindra, izany daholo ny bisikileta. Manana efitrano any izy ireo izay feno bisikileta an-tendrombohitra ihany koa, kodiarana roa mihodina koa, ary rehefa vita ny fiofanana ao amin'ny MIPS dia misy efitrano mangatsiaka tokoa. fa tsy maintsy mankany ianao.
Toerana iray ihany no aleha. Ity no efitrano fanorana. Roa ka hatramin'ny efatra, ka somary aloha kely aho amin'ny fanendrena ahy amin'ny efatra.
Fa tsy andriko aloha ny manotra. (mozika elektronika malefaka) Misy ivon-toeram-panadinana MIPS manerantany any ary hidina any ambany aho ary hihaona amin'ny lohan'ny fampiroboroboana ny vokatra, Marcus Seyffarth, protokolan'ny fantsona fantsona, ary hasehony ny fomba fiasan'izy ireo, ary toa mandeha izy mampiasa loha izay manana fitoviana hafahafa amin'ny ahy amin'ny endrika sy habe. (mozika elektronika malefaka) Marina, ao amin'ny laboratoara fanandramana aho izao.
Ary i Marcus no voalohany miaraka amiko, izay lohan'ny fampandrosoana ny vokatra. I Marcus, Marcus no iantsoako ny voalohany, satria izy dia iray amin'ireo Marcus dimy eto amin'ny MIPS Test Log Ahoana no hizahanao toetra ny Helmets. Ary hasehonao anay ny fitsapana sasany, sa tsy izany? - Eny eny.
Ka ao amin'ny foiben'ny MIPS any Stockholm izahay. Ity no fitsapana fitsapana Halldin izay ampiasainay isaky ny mitsapa aroloha izahay ho an'ny famokarana sy ny fankatoavana. Mazava ho azy, ampiasainay koa izy hampivelarana vokatra vaovao.
Ary hasehoko anao fotsiny ny fitsapana roa. Manandrana haingana ny fihodinana izahay. Izahay dia manandrana indray mankany amin'ny tendrontany misy zoro, zoro 45 degre.
Satroka bisikileta izay sedrainay amin'ny fiatraikany telo amin'ny fiatraikany telo. Izahay dia mizaha toetra azy, raha ny tanako no ravina, dia andramantsika azy amin'ity teboka andrana izay eo aloha ity. Mba hahazoana antoka fa ny MIPS, izay omnidirectional, dia afaka mihetsika amin'ny lafiny rehetra.
Saingy ataonay antoka fa mihetsika malalaka amin'io lalana io izy amin'ny alàlan'ity fitsapana ity. Izahay dia mizaha toetra amin'io lalana io, izay antsoinay hoe ny lafiny. Mazava ho azy, mizaha toetra izahay fa ny rafitra fiarovana ny atidoha MIPS dia mizotra mankany amin'izany lalana izany.
Ary avy eo dia andramantsika azy amin'ny antsointsika hoe fiantraikany manjavozavo izay hitako amin'ny tena fiainana. Ka misy fiatraikany amin'izao fotoana izao amin'ny fiarovan-doha. Aiza no hitranga ny ankamaroan'ny lozam-pifamoivoizana, hoy aho - Tsara, azoko atao ve ny maka ny lohan'ny andranao? Minitra iray lasa izay, nilanja taonina ity zavatra ity.
Toa ny habeny, eny, ny habeny, lohany 58cm, sa tsy izany. Izany no tena haben'ny lohako naja. Amin'ity tranga ity dia tsy mino ny tanjaky ny hatoko aho.
Satria tsy mora izany, sa tsy izany? - 42 kg izany. - Marina. - Samy manana loha loha fitiliana isan-karazany izahay amin'ny satroka fiarovan-d hafa, mazava ho azy fa manana habe antonony izahay, manana habe-jaza, habe lehibe fanampiny.
Izy rehetra dia manana rafitra haingam-pandeha hanangonana ny angona. Fa koa gyro mba hahazoana antoka fa tsy maintsy apetrakao tsara ny fiarovan-doha alohan'ny hametrahana fitsapana rehetra - Eny, marina, homeko anao izany - Eny, azonao apetraka ao anaty fiarovan-doha izany. Ka rehefa mizaha toetra izahay dia manandrana manao azy amin'ny fomba fampiasan-doha ny fiarovan-doha amin'ny fametahana tsara ny tadin'ny saokany.
Sa tsy ianao - mahazo aina tsara ny ahy aho. Fantatrao, misidina etsy sy eroa any ho any. - Apetraho izy ka ny orona dia tsara hatramin'ny sisin'ny fiarovan-doha, normal.
Hanana ity fitaovana kely ity izahay hahazoana antoka fa mifanaraka tsara araka ny pitsopitsony momba ny fiarovan-doha. Ny fiarovan-doha rehetra dia tena manana ny famaritana izany lavitra izany. Rehefa vita izany dia ahamboaro tsara ny rafitra, apetaho amin'ny dabilio.
Ary ho fantatry ny dabilio andrana amin'ny fizahana nataoko ny haavony, ny toerana misy ny fiantraikany ary ny zava-drehetra. Ny fitaovana dia misy ifandraisany amin'ity rindrambaiko ity, izay milaza amintsika hoe aiza no misy ny lohany. Mba hahafahantsika manana fanamboarana mitovy tanteraka rehefa manao fanandramana rehefa mitsapa ny fiarovan-doha tany am-boalohany sy ny kinovan'ny fiarovan-doha MIPS.
Raha vantany vao manana ny vakiteny aho, ny isa tiako hananana, dia esoriko fotsiny ilay levera mitazona ny loha sy ny fiarovan-doha mandritra ny fianjerana maimaim-poana. Ny famoahana lever dia 50 sm monja ambonin'ny avo. Avy eo afaka mandeha izy.
Vonoina ao amin'ny solosaina. Tsindrio ny bokotra hakana azy dia alatsao indray. (mozika elektronika mahery vaika) - Marina, efa teo ny fitsapana ary eto ny valiny, sa tsy izany? - Ie.
Ka ny angona fitsapana rehetra dia zahana amin'ny alàlan'ny tariby mankany amin'ny solosaina ary avy eo amin'ity programa ity. Amin'ny ankapobeny dia hitantsika eto ny fiakaran'ny tsipika. Ary araka ny hitanao amin'ny lahatsoratra, ny fihetsika miadana dia avy amin'ny fiantraikany.
Ka zana-kazo 1.000 isan-tsegondra izany mihetsika miadana. Azontsika atao ny maka sary azy amin'ny sary raha mila fandalinana haingana ianao. Ampitahao amin'ny lafiny iray ihany ireo kinova roa, ary d izany rehetra izany .- Okay.- Ary eo amin'ny sary dia ahitanao ny tsipika mavo-maitso sy fotsy, ny x, y, z, ny masamihafa samihafa.
Ary eo anelanelan'ireto andalana ireto dia fotoana dimy milliseconds - eny, raha jerena ny fipetrahana dia milanja 100 milliseconds. - Tena marina - Midika izany fa efa tapitra ny vokatra alohan'ny hahatsapanao fa tena nitranga izany - Eny, noho izany dia fotoana fohy dia fohy ianao mety tsy maintsy mamonjy ny ainao - Ka mety hisy vokany eo amin'ny milliseconds 8 angamba izany. Azoko aseho anao ny ampahany hafa amin'izany.
Azontsika jerena ny haingam-pandeha sy ny hafainganam-pandeha. Ireo singa mitovy aminao, maitso, fotsy sy mavo. Ny hafainganam-pandehan'ny angular dia mifamatotra amin'ny tsindrona sy ny fitriatry ny vatan'ny atidoha amin'ny ankamaroany. - Ary izany indrindra no rafitry ny MIPS handrehitra, sa tsy izany? - Marina indrindra.
Ka io isa io no ho fisongadinana na combo hitantsika rehefa mampitaha ny fiarovan-doha MIPS sy tsy MIPS. Ary hitanao fa mety hahazo isa ambany ianao amin'ny satroka fiarovan-doha MIPS - Eny, iray minitra lasa izay no nanoratanao fa aorian'ny fitsapana maro dia maro toa an'io dia hitanao fa tsy mitovy ny fiarovan-doha tsy MIPS. Fa koa ny tsy maintsy hisamboranao ny fiarovan-doha amin'ny fomba hafa.
Mitsambikina avo kokoa amin'ny rivotra izy io. Tsy hazandrano kely intsony izy io satria mitroka ny angovo. Ny angovo dia mbola ao anaty fiarovan-doha ary mbola avoaka any an-toeran-kafa - eny, marina.
Ny tiako holazaina dia satria manome taratra anao angovo izahay, ny slip plan, ny MIPS, mahazo ny angovo ianao fa tsy mitsambikina ambony dia mahazo --- eny, tsy ho tsapanao ao an-tsainao fotsiny izany raha nataonao Ny loza dia mety ho hitanao hitanao fa tsy dia matotra izy io. Ny angovo dia natelin'ny rafitrao - eny, tena marina. (mozika elektronika malefaka) - Mihevitra ve ianao fa ampy ny fampahalalana sy ny fanabeazana momba ny vokatry ny fikorontanana sy ny ratra amin'ny ati-doha amin'ny fihodinana fihodinana? - Ny tena zava-dehibe dia ny fanaovana aroloha ny olona.
Noho izany, tiako holazaina fa izany no zava-dehibe indrindra. Izany hoe manana aroloha ianao rehefa mandeha bisikileta. Na dia mandeha fiara fotsiny aza ianao hiasa na lavitra fotsiny.
Hitanay fa ny ankamaroan'ny lozam-pifamoivoizana amin'ireto fohy ireto dia mandeha any amin'ny magazay fotsiny ianao ary mividy na inona na inona. Apetaho ny fiarovan-doha. Manao aroloha aho isan'andro.
Toy ny hoe rehefa manao fehikibo amin'ny fiara ianao. Ho ahy dia mandeha tsy misy fitenenana izany. Any amin'ny firenena eoropeanina hafa, ny fampiasana aroloha dia tsy fahita firy toy ny any Soeda.
Fa raha azonao ny maha saro-pady ny lohan'olombelona sy ny ati-doha dia mazava ho azy fa te hanana aroloha sy fiarovan-doha azo antoka araka izay azo atao ianao. Androany nosedraina ny fiatraikany marina, tsy hianjera ianao. Milatsaka amin'ny zoro ianao.
bisikileta sy fampiakarana lanja
Ary afaka mahazo ny fihodinana izy io. Ary fantatsika fa ny ati-doha dia mora tohina kokoa amin'ny hetsika fihodinana. Ka antenaina hihatsara ny fiarovan-doha mandritra ny 10 taona ho avy.
Ary antenaina fa ny ankamaroan'ny fiarovan-doha dia hanana rafitra fanoherana ny fihodinana. (Mozika elektronika Cheeky) - Raha ny resaka fisafidianana fiarovan-doha ho ahy dia miankina amin'ny zavatra roa aho, miantehitra amin'izany Estetika amin'ny fiarovan-doha izany. Manao ahoana ny endriny rehefa anaovako azy io? Manao ahoana ny aina? Maivana ve io? Misy rivotra tsara ve nefa tsy nieritreritra mihitsy hoe tena miaro ny lohako izany? Satria nihevitra foana aho fa ny fiarovan-doha kilasy ambony dia hanao an'izany.
Ary tena tsy nieritreritra ny hetsika fihodinana mihitsy aho segondra. Zavatra mbola tsy reko raha tsy androany. Saingy azoko izao fa rehefa manana ny iray amin'ireo lozam-pifamoivoizana ireo isika dia io no tena manimba ny saintsika. (mozika elektronika mahery vaika) Ity tontolon'ny oram-panala ity dia manahaka ireo fihetsika mihodina izay ampitaina amin'ny ati-doha.
Ary ny ankamaroan'ny fiarovan-doha dia andrana amin'ny fitsapana mitete mitsangana toy ity. Raha mijery ny tontolon'ny oram-panala ianao dia ho hitanao fa tsy nihetsika ny lanezy. sary an-tsaina izany ny atidohanao izao ary manandrana mandray ny hafainganam-pandehan'ny angular izahay. rehefa miaina izany amin'ny bisikiletantsika isika.
Ary avy eo manomboka mahita ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana na lozam-pifamoivoizana ianao. Ary izany no antony namolavolana ny rafitra MIPS. Natao hamerana ny vokany sy hisorohana ny ratra amin'ny ati-doha.
Raha efa nahalala na inona na inona ianao dia omeo ankihibe ity lahatsoratra ity androany. Ary raha mila lahatsoratra hafa dia tsindrio fotsiny eto ambany.
Mendrika ny vola fanampiny ve ny MIPS?
MIPSsatroka manome anFANALAVAMmari-pahaizana fiarovana ho an'ny mpitaingina bisikileta rehetra. Ka raha vonona hisolo ny fiarovan-doha taloha ianao, nyFANALAVAM$ 20 na mihoatra hanavaozana avy amin'ny tsyMIPSnyMIPS-mody maodely tsara-manan-danjany vidiny.
Hey, izaho dia Dayton, ny lehiben'ny mekanika ao amin'ny evoSeattle. Eto aho hampahafantatra anao ny sasany amin'ireo fiarovan-doha bisikileta an-tendrombohitra tsara indrindra tamin'ny 2021. Ny fiarovan-doha no zavatra voalohany eo an-dohanao talohan'ny nidiranao ny lalan-kaleha, fa ny zavatra farany eritreretinao farany.
Soa ihany, amin'ity taona ity, misy fiarovan-doha bisikileta marobe miaraka amina safidy azo antoka mba hifanaraka amin'ny filan'ny mpitaingina rehetra. Ka ndao hiroso amin'ny fiarovan-doha bisikileta tsara evo dimy ho an'ny 2021. Eny tokoa, voalohany dia manana ny marika Troy Lee Designs A3 vaovao isika.
Ny A3 dia fiarovan-doha mahaliana satria raha ny tena izy dia miorina amin'ny fiarovan-doha efa misy izay fantatry ny olona maro sy tiany - ny A1. Ny fonony maoderina dia ny Troy Lee Designs lalina indrindra izay novokariny, ary mampiasa dial dial rotary azo ahitsy izy mba hifehezana ny mety. Izy io dia misy fitambarana volombava ho fiarovana ny fiantraikany amin'ny hafainganam-pandeha avo sy ambany, ary ny pads dia mora ihany koa ny manaisotra sy manasa azy.
Troy Lee Designs koa dia manana antsipirihany toy ny fidlock Fidlock ary visor tena azo ovaina, ary koa ny safidy loko avy amin'ny volafotsy sy ny mainty ka hatrany amin'ny ala sy modely. Ny fampifangaroana ny endrik'i A1 miaraka amina fandrakofana maoderina sy lalina ary endrika fanavaozana dia mahatonga ny A3 ho safidy tsara. Efa nitafy ny A1 nandritra ny taona maro aho ary tiako ny mety sy ny fiarovana, ka tena faly aho amin'ilay A3 vaovao.
Amin'ny faran'ny lafiny hafa dia ny loharano Giro. Ny Source dia tolotra vaovao avy amin'i Giro izay mifantoka amin'ny tsipika madio sy fiarovana premium. Manao laharam-pahamehana ny fiarovana sy ny rivotra izy amin'ny alàlan'ny vavahady 16 lehibe hitazonana anao ho milamina.
Izy io dia manana rafitra dial maivana mba hanidiana azy ireo ary miaraka amina visor azo ahodina. Tena izy no tena ilainao amin'ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta amin'ny alàlan'ny fanadiovana ireo fiasa tena ilaina sy fandefasana azy ireo ao anaty fonosana marevaka iray. Ny Source dia manana visor mitovy amin'ilay Montaro efa notafiako taloha.
Azo sintonina avo ampy hanipazana solomaso ao ambany izy, izay endri-javatra tsara ho an'ireo mpitaingina enduro. Ny Source Giro no safidintsika tianay indrindra ho an'ireo bisikileta an-tendrombohitra minimalist mitady fiarovan-doha tsara amin'ny vidiny mety. Manaraka izany dia ny session Smith.
Ny olona ao Smith dia manao fiarovan-doha bisikileta miavaka isan-taona, koa tsy mahagaga raha tapitra tamin'ity lisitr'ireo fiarovan-doha bisikileta tsara indrindra ity ny fivoriana. Ny fiarovan-doha Smith Session MIPS dia mampiasa ny herin'ny Koroyd - fitaovana tantely tantely kely maivana kokoa hampihenana ny lanja sy hampiakarana ny fikorianan'ny rivotra ao anaty fiarovan-doha. Ho fanampin'izay, ny Smith Session dia manana ny zavatra antenainao rehetra amin'ny alàlan'ny fiarovan-doha an-tampon'ny lalana - visor azo ovaina, toerana mety ary toerana ho an'ny solomaso anao.
Mandritra ny andro lava ao anatin'ny hafanana, dia tianay ireo MIPS fivoriana maivana sy azo tsofina. Manaraka izany dia tiako ny hafa, ny Fox Speed ​​Frame. Ny Speed ​​Frame nampidirina tamin'ny taon-dasa dia toa haingana be.
Ankoatry ny hatsarany mahafinaritra sy haingana, ny Speed ​​Frame dia iray amin'ireo fiarovan-doha bisikileta an-tendrombohitra tsara indrindra any. Izy ity dia fiarovan-doha bisikileta an-tendrombohitra feno fofonaina ary vidiny mirary tokoa. Toy ny fiarovan-doha rehetra amin'ity lisitra ity dia manana sisin'ny MIPS sy visor azo ovaina izy, ka mahatonga azy hifanaraka amin'ny solomaso sy solomaso.
Raha mitady fiarovan-doha bisikileta an-tendrombohitra ianao miaraka amin'ny sandam-bola tsara indrindra, ny Speed ​​Frame dia safidy lehibe. Farany fa tsy farany, ny fiarovan-doha Bushwacker 2 avy amin'ny Sweet Protection. Miaraka amin'ny fiarovan-dohan'izy ireo, ny hatsarana dia ao amin'ny antsipiriany.
Izy io dia somary feno molotra ho an'ny fijery mifintina, akorandriaka misy ampahany dimy hanatsarana ny fiarovana sy ny vavahady mijery tsy manam-paharoa. Mifanohitra amin'ireo fiarovan-doha hafa amin'ity kilasy ity, manana pads fanampiny misy habe samihafa izy ao ankoatry ny dial ho an'ny mety tonga lafatra. Iray amin'ireo fiarovan-doha amin'ny bisikileta tsara indrindra eny an-tsena noho ny fiasa ara-teknika sy ny endrika haingam-pandeha sy ambany.
Eny ary, mijanòna ao amin'ny evo.com haka ny iray amin'ireo alohan'ny hanjavonany. Raha mbola mila fanampiana ianao, dia faly miresaka momba ny fitaovana ny manam-pahaizana anay.
Tsidiho izahay amin'ny Internet, any amin'ny magazay, na miantso anay. Eto izahay mba hanampy. Misoratra anarana amin'ny fantsonay ary manorata fanontaniana amin'ny hevitra.
Misaotra nijery ary hahita anao eny am-pandehanana izahay.
Midika inona ny MIPS?
Rafitra fiarovana ny fiantraikany maro-maro
Azo antoka ve ny fiarovan-doha MIPS?
MIPSdia fanafohezana ny System Multi-Directional Impact Protection System.MIPSmaka tahaka ny rafitra miaro ny ati-doha ny teknolojia amin'ny alàlan'ny fampihenana ny hery mihodina ateraky ny fiatraikany amin'ny loha.
Fa maninona no maty ny MIPS?
MIPSmety homatymiaraka amina fisehoan-javatra vao haingana izay midika hoe ny maritrano dia fananan'ny kaontinanta sinoa iray sy Linux ankehitrinyMIPSmpandeha miala. Tamin'ny lahatsoratra tamin'ny 19 aprily lasa teo, nitatitra i Semiwiki fa ny Wave Computing dia nametraka ho an'ny bankirompitra toko faha-11 namela ny mpiasa rehetra handeha.
Tena mila fiarovan-doha MIPS aho?
MIPSdia momba ny fiarovana madio sy tsotra. Mampihena hery mihodina,Fiarovan-doha MIPSmampihena ny fahafahan'ny fikorontanana, mihoatra ny tsyFiarovan-doha MIPS, ary ratra amin'ny atidoha hafa.
Tena miasa ve ny teknolojia MIPS?
Ny fantatsika dia aMIPSny fiarovan-doha misy farafaharatsiny, farafaharatsiny 10% tsara kokoa amin'ny fikirakirana ny fihodinana noho ny tsyMIPSverisiona. Izay ihanyMIPShiteny. Ny satroka sasany dia tsara kokoa amin'ny famoahana ny fiantraikany mihodina noho ny hafa, na dia eo alohan'nyMIPSliner.
Misy fiovana ve ny MIPS?
'Manana fitsapana mihoatra ny 17000 vita tany Suède izahay izay mampiseho fa miaraka amin'ny fiarovan-doha rehetraMIPSdia tsara lavitra noho ny satroka tsy misyMIPS', hoy i Peter Halldin. 'IzahayAzamanana porofo ara-tsiansa fa ny fiarovan-doha misy sosona ambany ambany dia metymanaova fanovanaamin'ny fitsapana iray ahitana ny hery tangensial. '01.07.2020
lozam-pifamoivoizana steve smith
Fa maninona no ratsy ny MIPS?
nyratsy: Ny ambaratonga fampisehoana dia miakatra hatramin'ny 45 isa (avy amin'ny 30 amin'ny 2019). Izany dia mahatonga azy ho sarotra kokoa ny mahazo famporisihana. Ny ambaratonga fampisehoana miavaka dia miakatra amin'ny 85 isa. Ny ratsy tarehy: Ny fepetra kalitao maro izay notaterin'ny mpamatsy taona an-taonany maro no nesorina na namboarina ho an'ny 2020.
Tsara kokoa noho ny MIPS i Wavecell?
Araka ny fanadihadiana iray tao amin'ny Legacy Research Institute any Portland, Oregon, WaveCel dia mandaitra kokoanoho ny MIPSamin'ny fampihenana ny hery misy ny fiatraikany sy ny hery misaina ao amin'ny ati-doha.
Inona ny teknolojia MIPS ary ahoana ny fiasan'izy io?
MIPS Teknolojia fiarovan-doha - Ahoana no fomba fiasa. MIPS dia mpitarika manerantany amin'ny fiarovana ny loha sy ny hatoka vokatry ny traikefa mihoatra ny 30 taona avy amin'ireo mpamorona azy eo amin'ny sehatry ny haitao sy ny fikarohana ara-pitsaboana. Ny teknolojia MIPS dia maka tahaka ny rafitra miaro ny ati-doha amin'ny alàlan'ny fampihenana ny hery mihodina ateraky ny fiatraikany amin'ny loha.
Inona no mijoro amin'ny MIPS amin'ny fiarovan-doha?
MIPS BPS (Brain Protection System) dia teknolojia fiarovana ho an'ny fiarovan-doha. Raha misy ny fiatraikany amin'ny zoro, ny MIPS dia afaka mampihena ny hery fihodinana manimba, izay azo ampitaina amin'ny ati-doha, amin'ny alàlan'ny famelana ny fiarovan-doha hikomy amin'ny loha. Ireo hery mihodina ireo dia mety hiteraka korontana na hanimba ny ati-doha aza.
Iza ireo mpanjifa ny maritrano MIPS?
Ny mpanjifa MIPS dia manome alalana ny maritrano hamolavola ny mpikirakira azy manokana na ny cores eny ivelan'ny talantalana avy amin'ny MIPS izay miorina amin'ny maritrano. Ny maritrano MIPS64 dia fampiroboroboana torolàlana 64-bit avo lenta izay ampiasaina betsaka amin'ny fampitaovana fotodrafitrasa amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana MIPS toy ny Cavium Networks sy Broadcom.